IZArc kombaresarada-decompressor. Sida loo rakibo IZArc kombaresarada qaababka badan ee bilaashka ah iskana ilaaw WinRar | War gadget
IZArc kombaresarada-decompressor. Sida loo rakibo IZArc kombaresarada qaababka badan ee bilaashka ah iskana ilaaw WinRar
Hmaalmo kahor waxaan kahadlayay kombaresarada maqaalkaasna wuxuu ku sharaxay waxa compressor yahay iyo waxa loogu talagalay. Haddii aad akhriday maqaalka waxaad xusuusnaan doontaa inuu xusay qaar ka mid ah compresers aad loo yaqaan laakiin lagu bixiyay sidii WinZip o Winrar oo waliba xusay laba mid oo bilaash ah sida kuwa 7-Zip ama IZArc. Hagaag, maanta waxaan arki doonaa sida tan dambe loo rakibo, IZArc, oo ah kombaresare-decompressor gebi ahaanba bilaash ah Isbaanish.
IZArc wuxuu la jaan qaadayaa Windows 98 / NT / 2000 / XP / 2003 iyo Windows Vista. Markii hore kombaresaradaani lama jaanqaadi karin Windows Vista laakiin tan iyo markii Nooca IZArc 3.8.1510 waxay si fiican ugu shaqeysaa nooca 32-bit ee Vista. Sidaas darteed haddii aad leedahay mid ka mid ah nidaamyadan hawlgalka ee lagu rakibay kombuyuutarkaaga, uma baahnid inaad buuxiso shuruudo kale oo dheeri ah si aad u awoodo isticmaalka IZArc.
SHaddii aadan weli go'aansan inaad rakibto IZArc, waxaan ku xusuusin doonaa inay lacag la’aan tahay, oo aanad u baahnayn inaad buuxiso shuruudo dheeri ah oo rakibidda ah iyo marka laga reebo Isbaanishka in ka badan 40 luqadood oo la heli karo. Izarq waa kombareser kaa caawin doona inaad ku fuliso dhammaan howlaha isku soo ururinta-kala-jajabinta faylashaada adigoon bixin dinaar. Waxaad awoodi kartaa:
siib oo kala fur
abuur faylasha is-cadaadin (kaliya laba guji) si aad ugu dirto asxaabtaada boostada si ay u furi karaan iyagoon haysan wax kombaresarada kombiyuutarkooda lagu dhejiyo
u kala qaad feyl qaybo badan
ku biir faylasha loo qaybiyay qaybo badan
waad awoodaa encrypt lambarka sirta ah faylashaada la cadaadiyey si aad uga ilaaliso indha indheynta
dayactir faylasha la kifaajiyey
oo xitaa loo beddelo feylasha inta udhaxeysa qaabab isku dhafan oo kala duwan
BWaa hagaag waxaan u maleynayaa inaad horeyba ugu qanacday wanaagga IZArc. Iska iloow WinRAR iyo WinZIP soona dhaweyso beddel IZArcMaxaad ugu bixineysaa hal barnaamij mid kalena sidan oo kale bilaash? Aynu ku bilowno rakibaadda IZArc:
1aad) Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa soo dejinta barnaamijka. Waxaad haysataa laba ikhtiyaar, oo ka socda Softonic adigoo gujinaya Halkan, ama bogga rasmiga ah ee IZArc. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waxaan kala soo bixi doonnaa nooca ugu dambeeya ee barnaamijka, kaas oo hadda ah 3.81.1550. Xusuusnow in IZArc ay lacag la’aan tahay, sidaa darteed waad awoodi kartaa download bilaash ah mid ka mid ah labadan bog oo bilaash ugu isticmaal. Rakibaadda waxaa lagu sameyn doonaa Ingiriisi laakiin waa wax fudud oo dhamaadka rakibaadda waxaan awoodi doonnaa inaan barnaamijka ku dhigno luqadda aan dooneyno.
2aad) Markii aan helno barnaamijka aan soo dejino, laba jeer ayaan gujineynaa feylka oo rakibida IZArc ayaa bilaabmi doonta. Daaqadda ugu horreysa ee soo muuqata, waxay nagu soo dhaweynayaan Ingiriisiga ("Wellcome to the IZArc 3.81. ...") waxaan gujin doonnaa "Next>" daaqadda aqbalaadda liisanka isticmaalaha ayaa soo muuqan doonta:
Horey waad u ogayd in si aad u isticmaasho barnaamij ay tahay inaad ogolaato shuruudaha ay ku soo rogeen abuurayaasheeda, hadaba akhristo liisanka (af ingiriisi) hadaad ogolaatona hubi ikhtiyaarka "Waan aqbalay heshiiska" ka dibna riix «Next> »
3aad) Daaqad kale ayaa furmi doonta taas oo ah inaad riixdo «Next>» markale iyo daaqada furmi doonta kadib riix «Next>» markale. Waxaad iman doontaa daaqad cinwaankeedu yahay "Xulo Hawlo Dheeraad ah":
Halkan waxaad ku haysataa laba ikhtiyaar. Waxaad ku abuuri kartaa astaan ​​ku taal barta bilawga degdegga ah («Abuur Muuqaal Degdeg Degdeg ah») ama Abuur astaanta IZArc dusha desktop-ka ("Abuur astaamaha Desktop"). Xulo xulashooyinka adiga xiisaha leh adiga oo calaamadeeya sanduuqa u dhigma. Kadib dhagsii badhanka «Next>».
4aad) Daaqada furan, dhagsii "rakib" rakibaadduna way bilaabmi doontaa. Markuu dhammaado, daaqadda xulashada luqadda ayaa furmi doonta. Dooro luqadda aad dooneysid IZArk adoo la wareegaya baarka ka muuqda dhinaca midig ee daaqadda. Markaad dooratid luqad dhagsii «Ok».
5aad) Ka dib markaad gujiso "OK", daaqada "Ikhtiyaarrada" ayaa si otomaatig ah ugu furnaan doonta luqadda aad dooratay, halkaasoo aad isbeddello kala duwan ku sameyn karto goobaha barnaamijka. Waqtigan xaadirka ah waxaan riixi doonnaa oo keliya "Aqbal" waxaanan sii wadi doonnaa rakibidda. Buug ka sii horumarsan oo aan dhowaan diyaarin doono, waxaan ku arki doonnaa waxa ay ikhtiyaarradan yihiin iyo sida loo qaabeeyo barnaamijka.
6aad) Daaqad rakibidda kama dambaysta ah ayaa furi doonta, iyada oo nagu wargelinaysa in rakibidda IZArc la dhammaystiray. Calaamadee sanduuqa "Eeg Waxa Cusub" haddii aadan rabin inaad akhrido feyl qoraal ah oo leh hagaajinta lagu soo bandhigay barnaamijka (waa Ingiriis) oo guji "Finish" si aad u dhammayso.
BHagaag tan, waxaad horeyba udhameystirtay rakibida kombaresarada weyn ee u adeegta bedelka ugufiican ee bilaashka ah kombaresarada WinRAR ee labixiyay. Waxay noqon kartaa markii aad gujiso badhanka "Finish" ee daaqada ugu dambeysa, biraawsarkaaga internetka ayaa furmaya oo ku xirmaya qayb laga bilaabo bogga rasmiga ah ee IZArc halkaasoo ay ku sharraxayaan, Ingiriis, sida loogu sameeyo tabaruce tabaruc ah abuureyaasha IZArc. Samee tabaruc haddii aad rabto ama daaqadda iska xir.
EWaxaan rajeynayaa inaad sida ugu badan uga faa'iideysan doonto barnaamijkan adiga oo kaashanaya buugan-gacmeedkan yar, waan dhammaystiri doonaa casharrada qaabeynta iyo isticmaalka IZArc markaa waad ka faa'iideysan kartaa dhammaan astaamaha kombuyuutarradan bilaashka ah ee cajiibka ah. Ilaa markaas salaamaha canabka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » IZArc kombaresarada-decompressor. Sida loo rakibo IZArc kombaresarada qaababka badan ee bilaashka ah iskana ilaaw WinRar
Maqaal aad u fiican oo ka sarreeya dhammaanba waxqabadka, waxay iga caawisay inaan go'aansado inaan rakibo IZArc, horay ayaan u tijaabiyay oo si yaab leh ayey u shaqeysaa.
Jawaab si aad u siiso
Hello Marvin, waad ku mahadsan tahay ereyadaada iyo booqashooyinkaaga. Bogga bidixda waxaa loogu talagalay sababo barnaamij, bogga oo dhan waxaa loo qaabeeyey miisas la'aan (marka laga reebo dhowr meelood) waxaanan bilaabay inaan bidix ku xirto si aan u fududaado meeleynta
. Isla marka aan muddo helo ayaan u diraa xarunta, maadaama aan sidoo kale ka doorbido aaggaas.
Salaan qaas ah.
Mahadsanid, dilaaga aan jeclahay. Mar labaad sharaxaad waxtar leh. Waan kugu raacsanahay: IZARC waa ikhtiyaar aad u fiican, oo ku daalay inaad cusbooneysiiso zip ama rar mar kasta marar badan.
Iyo waxaas oo dhan, iyo maadaama ay tahay markii ugu horreysay ee aan qoro, waxaan kuugu hambalyaynayaa dadaalkan waxbarasho. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaan lahaa degelkan ku dhowaad sanad ka hor, markii aan bilaabay inaan si dhab ah u jaleeco kumbuyuutarka iyo gaar ahaan inaan ka baxo internetka. waxbarasho. Chapeau.
By the way, maniac that I am, maxaad u dooratay inaad u soo bandhigto bogga ku dheggan dhinaca bidix oo aan toos u xuddun lahayn?
Kaliya hal su'aal, miyay tahay inaan ka tirtiro Winrar si aan u soo dejiyo Izarc? Aad baad u mahadsan tahay
Ku jawaab papino
Maya papino, labadiinaba waad wada rakibi kartaan oo midba mar waad isticmaali kartaan.
Mahadsanidiin ragga, laakiin waad kadhigi laheyd waxoogaa dhammaystiran, ma aqaano sida looqoro, loo saxo, loo tijaabiyo faylasha la isku daray, ragga salaan ...
Ku jawaab Queni
Wax walba waxay imaan doonaan waqtigooda Queni 😉
cusbooneysiin hdz dijo
Tilmaamaha ku saabsan sida loo kala furfuri karo faylka kordhinta .gz waxay i weydiineysaa mugga id 0 ka dibna waxay i weydiineysaa mugga id -1 ojsal ayaa iga caawin kara t .mahadsanid
Jawaab si aad u cusbooneysiiso hdz
Saaxiib, dhibaatada ku haysata ayaa ah inaad ka maqantahay qaybo faylka ka mid ah. Ilaa intaad wada haysatid, ma awoodid inaad hoos udhacdo.
Waad salaamantihiin salaanta igu wanaagsan. haye miyaa inaan iska fogeeyaa kombaresaradeyda hore mise sidaas oo kale ayey sameysaa?
Waxaad ku wada rakibi kartaa kombaresarada isku mar waxna ma dhacaan. Laakiin haddii aad rabto inaad mid keliya yeelato, waa inaad kan kale iskaa iskaa u tirtirto.
Waa maxay bog wanaagsan, horay uma aanan helin, waxaan qabaa
Aad baan idiinku wanagsanahay inaad noo soo gudbisaan, waxayna ka timid -
caawimaad weyn maxaa yeelay waxaad ugu sharraxeysaa qaab aad u -
la fahmi karo, Waxaan iska ilaalin doonaa casharradaada.
Ku jawaab martha
Waad salaaman tihiin, waan rakibay barnaamijkaas aad ku tiraahdaan halkan izarc laakiin markaan dhowr filim ku soo dejisto qaab .RAR iima ogola in aan ku furo barnaamijkan mana garanayo sababta aan qalad ugu helo, waxaan isku dayay 4 kala duwan filimada iyo anigu ma dhaafi karo. Dadka kale HADDII ay si fiican ugu shaqeyso iyaga wayna furayaan laakiin winrar ayay ku xiran yihiin. Fadlan i caawi, isii tusaale-tallaabo ah oo ah sida loo kala furfuro ama lacag-bixinta bilaashka ah halka ay ku taal sifiican u sharax, Fadlan iigu jawaab sida ugu dhakhsaha badan. Aad baad u mahadsantahay
Ku jawaab davidtenrife
Ma maqashaa sida aan ugu cadaadin karo feyl barnaamijkan! ????
Mahadsanid, waad i caawisay, waxaan rajeynayaa inaad markale i caawin kartid
maxaa yeelay iyagu ma sharxaan isla nidaamka tusaale
Waa salaaman tahay, waan ku faraxsanahay inaad gelisay boggan, waan soo dejiyey oo waxaan rajaynayaa in murug-bixiyuhu uu ka fudud yahay kan loo yaqaan 'win rar rar' ama 'win zip' sababtoo ah ma fahmin kuwa
Jawaab abdiel Gg
Waa doqonno ay u qaadaan, waxba maan soo wadin oo astaamuhu ma soo bixin
psss tani wax yar oo layaableh shabaqa ma fahmin maxalliga
laakiin dagaalka ay sameeyeen laakiin waligiis lama siidayn, uma adeegaan inay sidan kugu sameeyaan
HHoLA !! Aad ayaad u mahadsantahay !! talaabo kastaa waa mid aad u fiican oo waxtar leh !!! aad baad u mahadsantahay caapo !!!
Khamri, waa barnaamij fiican laakiin haddii aan winrar rakibay, waa la ii oggol yahay inaan rakibo ama dhibaato ayaa ka haysata dirawalkayga adag, Thanks
Jawaab ku saabsan cruz hernandez r
diskulpen dhibaato ayaan qabaa! Ma furi karo filim ku socda 8 qaybood! waxay ii sheegaysaa mugga id 0! Waxaan jeclaan lahaa caawinta km !!
Maalin kasta nuujin baa dhasha. Ha ka mid noqon